China Casserole e nemilo Round SKU NO.271-272-273-274-275-276 Manufacturers kunye Suppliers | SJZ JINXUAN
Glass Tea imagi kunye lokucoca ulwelo SKU NO.1427
Double Wall Glass imagi SKU NO.12130
Casserole kwimilo Round SKU NO.271-272-273-274-275-276
Bakeware ne ehlukanisayo SKU NO.2640-2642
Ezingaqhelekanga Kitchen-to-Table nsimbi The casserole iglasi ezenza kube lula ukuba upheke ngaphambi kwexesha ze ukugcine efrijini okanye kwisikhenkcezisi ukuze kamva. Best zonke, i uhambo kakuhle ukusuka eziko nawuphi itheyibhile sentlalo kuba kukulungiselela bendawo casserole, kunye eseleyo ungabuyela kanye emva efrijini ekupheleni obusuku. Nceda Qaphela: MUSA ukuhambisa iglasi casserole ngqo freezer ukuba eziko. Vumela nobudlelwane ukudla phambi kokuba ekuphekeni okanye ayaphola eziko. Qiniseka ukusebenzisa i potholder xa uphethe ...
Ezingaqhelekanga Kitchen-to-Table nsimbi
Le casserole iglasi ezenza kube lula ukuba upheke ngaphambi kwexesha ze ukugcine efrijini okanye kwisikhenkcezisi ukuze kamva. Best zonke, i uhambo kakuhle ukusuka eziko nawuphi itheyibhile sentlalo kuba kukulungiselela bendawo casserole, kunye eseleyo ungabuyela kanye emva efrijini ekupheleni obusuku.
Nceda Qaphela: MUSA ukuhambisa iglasi casserole ngqo freezer ukuba eziko. Vumela nobudlelwane ukudla phambi kokuba ekuphekeni okanye ayaphola eziko. Qiniseka ukusebenzisa i potholder xa yokuphatha neglasi kushushu.
Nokuba liziko lezonka, Microwave Safe
Le casserole iglasi ingasetyenziswa ukubhaka okanye kufudumeze ukutya eontini eqhelekileyo okanye oven. Bona amacala iglasi nge kuvumela kwamandla ayokufikelela kwi inkqubela kutya xa ukubhaka, ngokubonelela ulawulo wongezelela phezu iziphumo zokugqibela.
Ezi casseroles zenziwa ngeglasi-ilungele borosilicate ukuba ukwandiswa thermal kwaye ngoko ngaphantsi agule laqhekeza xa baboniswa utshintsho obushushu.
Nceda Qaphela: Glass casserole akunakusetyenziswa phantsi pfumerile, phezu stovetop, okanye utywala okanye Izitofu ubushushu enkonkxiweyo njengomthombo ubushushu ngqo.
icala Integrated ephatha ngayo ukuvumela ngokukhuselekileyo kushenxiswe casserole iglasi kwaye ziphuma eziko kwaye ukusuka ekhitshini netafile lokutyela-igumbi okanye Buffet kwaye emva kwakhona. Izibambo icala lula ukunceda ukuqinisekisa bubambe ekhuselekileyo, naxa benxibe mitts eziko zamafu.
Previous: Casserole in seqanda SKU NO.277-278-279-2710-2711
Next: Jasper Coloured Borosilicate Glass SKU NO.2670
Casserole kwimilo Round SKU NO.274D
Casserole kwimilo Round SKU NO.272D
Casserole kwimilo Round SKU NO.273D
Casserole in seqanda SKU NO.2712
Casserole in seqanda SKU NO.277-278-279-2710 ...
2019 ambiente Frankfurt Booth ubushushu ukumelana ...
Borosilicate Glass Food Isikhongozelo , Borosilicate Glass Pot, Borosilicate Glass Bakeware , Double Walled Tea Glass, Borosilicate Glass Ukutya Imigqomo , Borosilicate Glass Casserole ,